Gudidda Cadaaladda Oo Fadhi Deg-deg Ah Ka Yeelatay Weerarka Lagu Qaaday Garsoorihii Maxkamadda Hargeysa, Gudoomiyaha Maxkamadda Sare Iyo Ururka Qareenada Oo Canbaareeyay | Araweelo News Network (Archive) -
Gudidda Cadaaladda Oo Fadhi Deg-deg Ah Ka Yeelatay Weerarka Lagu Qaaday Garsoorihii Maxkamadda Hargeysa, Gudoomiyaha Maxkamadda Sare Iyo Ururka Qareenada Oo Canbaareeyay
Hargeysa(ANN)Gudida Cadaaladda Somaliland ayaa fadhi deg deg ah ka yeeshay maanta falkii weerarka ahaa ee lala beegsaday gudoomiyihii Maxkamadda gobolka Hargeysa C/rashiid Duraan oo dablay hubaysani saaka waaberigii tacshiirad rasaas ah la beegsadeen, taas oo
sababtay in dhaawac soo gaadho. Kadibna loo qaado dhinaca dalka Djibouti.
.Kulankaa ay Gudidda Cadaaladda Somaliland yeesheen, waxay ku cadeeyeen inaanay wax baqdin ah ku abuurayn falkaasi hawshii ay qaranka u hayeen oo aanu cabsi gelinayn, isla markaana waxay sheegeen in aragtidoodu ay tahay inaanay ka weecan Garsoor ku dhisan cadaalad iyo in sharciga loo sinaado.
Gudoomiyaha Maxkamada Sare ee Somaliland, isla markaana ah Gudoomiyaha Gudida Sare ee Cadaalada Dr. Yuusuf Ismaaciil Cali oo saxaafada la hadlay kulankaa ka dib ayaa canbaareeyay falkaa waxashnimada ah ee lagu beegsaday Gudoomiyihii Maxkamada Gobolka Maroodi jeex, isla markaana ay dareensan yihiin in dhaawaca loo gaystay Gudoomiyaha ay la xidhiidho dacwadihii uu xaqa ka maray.
Gudoomiyaha Maxkamada Sare waxa uu tilmaamay inay ku kalsoon yihiin Shacbiga iyo Xukuumadda Somaliland oo fal celin deg deg ah ka sameeyay dhacdadan waxashnimada ah ee dablay hubaysani ay ku dhaawaceen Gudoomiyihii Maxkamada Gobolka Maroodi jeex,waxaanu sheegay in Qarankani uu soo maray marxalado tan ka dhibaato baddan, balse uu xusay in duruuf kasta lagaga soo gudbi jiray isku duubni iyo wada jir. Sidaa awgeed wuxuu carabka ku adkeeyay in falkaasi aanu noqon doonin mid baqdin ku beera bah’da garsoorka oo la rabo ayuu yidhi inay ka weecdaan dariiqa cadaaladeed ee ummada Somaliland u ooman tahay, isla markaana ay socoto baadhista dhacdadan kalsooni buuxdana ay ku qabaan.
“Waxaanu cambaareynaynaa falkii lagu dhaawacay Guddoomiyihii Maxkamadda gobolka Hargeysa oo loogu tallo-galay in qudha lagaga jaro, aad ayaanuna u cambaaraynaa falkaasi bahalnimada ah ee lagu dhaawacay Cabdirashiid Maxamed Duraan, haddii aanu nahay garsoorkii iyo guddidii cadaalada Somaliland-ba,”ayuu yidhi Guddoomiyuhu.
Dhinaca kale Ururka Qareenada Somaliland (SOLLA), ayaa canbaareeyay falka isku dayga dilka ee loo geystay gudoomiyihii Maxkamadda gobolka Hargeysa. Qoraal canbaarayn ah oo uu maanta soo saaray Gudoomiyaha Ururka Qareenada Somaliland ee SOLLA Garyaqaan Jaamac Cilmi Xaashi, ayaa u qornaa sidan:-“Ururka Qareenada Somaliland ee SOLLA, iyagoo ka xun weerarkii waxshinimada ahaa ee lagu dhaawacay Gudoomiyaha Maxakamada Gobolka M/Jeex Muddane C/rashiid Maxamed Maxamuud (C/rashiid Duraan), wuxuu si kulul u Canbaaraynayaa Weerarkaas lagu Bartilmaameedsaday Gudoomiyahaa ka tirsan Bahda Garsoorka Jamhuuriyada Somaliland.
Sidoo kale waxaan ugu Baaqayaa Xukuumada in ay Baadhis Sugan ku samayso Dhacdadaas Foosha Xun, dadkii falkaas gaystana Sharciga la hor keeno. Waxa kaloo aanu ugu Baaqaynaa Xukuumada in ay dajiso oo ay hirgaliyaan Qorshe cad oo lagu sugayo Ammaanka hawl- wadeenada Garsoorka goobahooda shaqada iyo guryahoodaba, iyagoo dabeecada shaqadooda ay Khatar ugu sugan yihiin mar kasta, waayo Ka hortagu wuxuu ka wanaagsana yahay daaweynta.” Ayaa lagu yidhi qoraalkaa.